Beel mise Khibrad iyo Aqoon? By Yuusuf Garaad - Hablaha Media Network
Beel mise Khibrad iyo Aqoon? By Yuusuf Garaad
HMN:- Marka uu dhismo Gole siyaasadeed oo Soomaaliyeed - mid Baarlamaan ama mid Xukuumadeed, heer Federaal ama heer Goboleed, saxaafadda waxaad ku arkeysaa cinwaan ku dhahaya 'akhriso magacyada iyo beelaha ay ka soo jeedaan'.
Ilama ahan in Dhaqankan cusub ee Saxaafadda qoraalka ahi uu yahay mid u adeegaya Qarannimada Soomaaliya. Taa cagisgeed waxaan u qabaa in uu wiiqi karo kalsoonida ka dhexeysa xubnaha Golaha iyo ama tan kala dhexeysa Shacabka.
Ku sii dar oo waa fadhiidnimo xagga saxaafadda ah. Qofku qabiilka ma dooran kamana bixi karo. Markii uu dhashay ilaa maantana waa lagu sheegayay qabiilkaas. Macna badan ma soo gudbineyso reerka uu yahay in aad war ka dhigto.